Indlu yesimanje Kanokusho💫 1BR
Mombasa, Mombasa County, i-Kenya
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ketty
Ifulethi lisendaweni ethandwa kakhulu eMombasa. Kuyi-1br yekhaya, ephephile, ethule futhi enethezekile enikeza umuzwa womuntu siqu.
Ngenkathi uhlezi nathi, ungavakashela i-Pirates beach/nyali beach edumile okuyimizuzu eyi-10 ukuya kuyo. Futhi sitholakala eduze nenxanxathela yezitolo ezinkulu i.e Nyali Centre, izitolo ezinkulu, izinkukhu zezinkukhu njll.
Ukuze kube lula kuwe, sikunikeza imaski eyengeziwe, ikhofi nezinto zokugeza
Uma kukhona engingakwenza ukuze uhlale ukhululekile ngicela ungithumelele umyalezo noma ungishayele.
Ingabe uhambela ibhizinisi noma iholidi lokhu nakanjani indawo yakho yokubalekela. Ikhaya lethu linikeza indawo eyanele yokupaka, i-smart TV lapho izivakashi zami zithola khona ukubuka amavidiyo e-YouTube namamuvi e-Netflix nochungechunge olune-Wi-Fi engaphazamiseki.
Igumbi lokulala eliyinhloko linombhede olingana nendlovukazi enezingubo zokulala ezimhlophe ezikhazimulayo nemicamelo eqinisekisa ukulala okuphephile, okuzwakalayo nokunethezekile.
Indlu yokugezela ivulekile!Ngaphandle kokufuna ukumosha isimanga, ishawa izokwenza ukuthi wenze umdanso omncane- ngeke ukwazi ukuzimisa.
Ikhishi linefenisha ephelele futhi ungajabulela ukuzenzela ukudla kwakho noma ukhethe ukudla ezindaweni zokudlela eziseduze eziseduze nendawo. Izitolo namaKhemistri aseduze kwesakhiwo uma udinga ukubamba okuthile ngokushesha.
Ukuze kube lula kuwe, ngikunikeza okwengeziwe
Izinto zokugeza (ukugeza umzimba nokugeza izandla)
Izitsha lapho ungawasha khona izingubo zakho
Ikhofi/izikhwama zetiye /ushokoledi wokuphuza
Sibuyisela lezi zinsiza ukuze sihlale isikhathi eside (izinsuku ezingaphezu kweziyi-7) futhi igumbi lihlanzwa kahle nabahlanzi abangochwepheshe benaka imininingwane ngayinye, amatop counter, amaknobhu namafasitela konke kuhlanjululwe ngaphambi kokuthi ungene futhi ngaleyo ndlela ukuphepha kwakho kuqinisekisiwe ikakhulukazi. kulezi zikhathi ze-Covid 19.
Qaphela: Ifulethi alikho phansi futhi izivakashi kuzodingeka zithathe izitebhisi.
Sibheke ngabomvu ukukubamba.
Indawo ethandwa kakhulu, ekhula kuqala esifundeni saseMombasa, lapho unemizuzu embalwa nje ushayela amahhotela afana neSarova, iMombasa beach,pride Inn, inyali beach, pirates ngisho nezitolo ezinkulu ezifana nenkaba yedolobha iNyali, icarrrefour Naivas kanye nemigoqo eminingi nezindawo zokudlela.
Ngingumuntu othanda ukusebenzelana nabantu futhi ngihlale ngifona noma ngithumele umbhalo